खुुकुरी प्रहारबाट दुई युवा घाइते
तुलसीपुर, ३० वैशाख । दाङमा खुकुरी प्रहारबाट दुई युवा घाइते भएका छन् । सोमबार राति पौने ९ बजेतिर खुकुरी प्रहारबाट तुलसीपुर उपमहागनरपालिका वडा नं ६ गोलौरा निवासी २९ वर्षीय टीकाराम बस्नेत र २८ वर्षीय प्रकाश नेपाली गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिहरनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । तुलसीपुर –१२ एयरपोर्ट निवासी […]
लकडाउन उल्लंघन गरेकोमा भारतीय नायिका तथा मोडल पुनम पाण्डे पक्राउ
मुम्बई, वैशाख २९ । लकडाउन उल्लंघन गरेपछि भारतीय नायिका तथा मोडल पुनम पाण्डे पक्राउ परेकी छन् । उनलाई मुम्बई प्रहरीले आइतबार कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणको लागि गरिएको लकडाउन उल्लंघन गरेपछि पक्राउ गरिएको हो । पुनम विएमडब्लु कारमा आफ्नो साथीहरुसँग मस्त घुमिरहेकी थिइन् । पुनमलाई सरकारी आदेश पालना नगरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले पुनमसँगै उनका […]
सुनसरीमा करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु
सुनसरी, बैशाख २९ । सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-१६ का ३५ बर्षीय बिष्णु चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । आज बिहान ७ बजेको समयमा घर छेउमै रहेको खोल्सामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा अचानक आफैलाई करेन्ट लाग्दा निजको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । स्थानीयवासीले जानकारी गराउनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीबाट प्रहरी टोली खटि गई कानूनी […]
खोटाङमा लडेर १ जनाको मृत्यु
खोटाङ, बैशाख २९ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका-७ का ५५ बर्षीय पदम बहादुर भुजेल सामुदायिक वनमा मृत फेला परेका छन् । बैशाख २५ गते घरबाट खेत जान भनी निस्किएका भुजेल बेलुकासम्म पनी घर फर्केर नआएपछी खोजतलास गर्ने क्रममा आज बिहान ७ बजे मतकेना सामुदायिक वनभित्र बाटोदेखि करिव २०० मिटर तल मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । […]
लकडाउनमा चोरी गर्ने ११ जना पक्राउ
काठमाडौँ, २९ वैशाख । कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहँदा महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धले चोरीमा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन शुरु भएको थियो । बौद्ध क्षेत्रको विभिन्न स्थानबाट सो कार्यमा संलग्न दुई महिलासहित नौ पुरुषलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको वृतका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो […]
कलैया, २९ वैशाख । तराई मधेश राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक पवन यादवलाई कुटपिट गर्ने समूहका एकजनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कलैया उपमहानगरपालिका–३ भवानीपुरका छोटे मन्सुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । मन्सुरलाई घरबाट पक्राउ गरिएको हो भने बाँकी तीनजनाको खोजी भइरहेको उहाँले भन्नुभयो । पक्राउ परेका मन्सुरमाथि […]
सोलुखुम्बुमा अबैध हतियार सहित १ जना पक्राउ
सोलुखुम्बु, बैशाख २८ । सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका-३ मा रहेको नागीयाङ सामुदायिक वनबाट अबैध भरुवा बन्दुक सहित १ जना पक्राउ परेका छन् । उक्त सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुको चोरी शिकारी भईरहेको भन्ने बिशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय सोताङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले स्थानीय २५ बर्षीय प्रदिप राईलाई १ थान भरुवा बन्दुक र १ वटा मरेको कालिज सहित […]
नियन्त्रीत लागूऔषध ब्राउनसुगर सहित १ जना पक्राउ
झापा, बैशाख २८ । झापाको कन्काई नगरपालिका-४ का ४० बर्षीय प्रदिप बुढाथोकी नियन्त्रीत लागूऔषध ब्राउनसुगर सहित पक्राउ परेका छन् । बुढाथोकीले आफ्नै घरबाट नियन्त्रीत लागूऔषध ब्राउन सुगरको कारोवार गरिरहेको बुझिएको थियो । बिशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजलाई घरबाट नै १० ग्राम ब्राउन सुगर सहित आज बिहान साँढे १० बजे […]
पानीमा डुबेको अवस्थामा १ बृद्धा सहित २ जना मृत फेला
बिराटनगर, बैशाख २८ । झापा र सोलुखुम्बुमा पानीमा डुबेको अवस्थामा १ बृद्धा सहित २ जना मृत फेला परेका छन् । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका- पाराखोपी बस्ने ७३ बर्षीया बेटिया किस्कु शनिवार दिउँसो २ बजे कमलखोलामा मृत फेला परेकी हुन् । यसैगरी सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका-३ खहरे बस्ने १८ बर्षीय दत्तसिंह राई हुगा खोलामा मृत फेला परेका छन् […]
मोरङमा करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु
मोरङ, बैशाख २८ । मोरङको बेलवारी नगरपालिका-९ का ३० बर्षीय दिलिप चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । शनिवार अपरान्ह साँढे ४ बजेको समयमा स्थानीय दुधे खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा अचानक आफैलाई करेन्ट लागेको थियो । घाईते भएका चौधरीको उपचारको क्रममा धरानको बि.पी. कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान घोपामा साँझ साँढे ५ बजे मृत्यु […]
ठुलो परिणामको लागुऔषध सहित ३ जना पक्राउ
सुनसरी, बैशाख २८ । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-६ नहरचोकबाट ठुलो परिणामको लागुऔषध सहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बिशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भोक्राहा नरसिंह गाउँपलिका-३ का राज कुमार मण्डललाई ३ हजार ८ सय ४० क्याप्सुल ट्रोमाडोल र ४ बोतल डाईलक्स डि.सी. तथा १६ हजार ७०० नगद र […]
प्रधानाध्यापक बुढाथोकीको हत्या
धादिङ, २८ वैशाख । उत्तरी धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका–५ फुलखर्क दाङसिङमा शनिबार निजी विद्यालयका प्रधानाध्याकको हत्या भएको छ । गङ्गा–जमुना एकेडेमीका प्रधानाध्यापक ३० वर्षीय यमबहादुर गुरुङको हत्या भएको हो । उनको हत्या आरोपमा प्रहरीले छिमेकी ३१ वर्षीय भीमसेन बुढाथोकीलाई आज गिरफ्तार गरेको छ । विद्यालय बिदा भएकाले गुरुङ घरमै थिए । शनिबार भारी बोकेर घरबाट मिलमा […]
प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि हवाई फायर, २ जना घाइते
दुल्लू, २८ वैशाख । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४ मा स्थानीयवासीले डुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले जवाफी कारवाहीमा दुई राउण्ड हवाईफायर गरेको छ । ढुङ्गामुढासहित प्रहरी र स्थानीयवासीबीच शनिबार साँझ करिब ७ बजेतिर झडप हुँदा एक प्रहरी जवान खगेन्द्र सुनार र स्थानीय कमल शाही घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । सालटाकुरा नाव–साल्टाडाँडा सडक निर्माणका क्रममा लकडाउनको उल्लङ्घन […]
चट्याङले गोठमा आगलागी
गुल्मी, २८ वैशाख । मुसिकोट नगरपालिका-९ अर्लाङ्कोटको दासिकोटमा आज चट्याङ पर्दा एउटा गोठमा आगलागी भएको छ । चटयाङले डाँसिकोट पखरेबारी निवासी प्रेमबहादुर विकका गोठमा रहेको भैँसी मरेको वडाध्यक्ष नरेशराज खरेलले बताउनुभयो । आगलागीबाट गोठको माथिल्लो तलामा रहेको खाद्यान्न लगायत अन्य सामग्रीसमेत जलेर पूर्ण नष्ट भएको छ । राति ठूलो आवाजमा चट्याङ परेपछि आगलागी भएको थाहा […]
चितवनमा श्रीमानले गरे श्रीमतीको हत्या
चितवन, २८ वैशाख । घरायसी विवादका कारण पूर्वी चितवनमा शनिबार राति एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार खैरहनी नगरपालिका–९ सिमलटाँडीमा ४२ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीले ३४ वर्षीया श्रीमती मञ्जुको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालका अनुसार राति ९ः४५ बजेको समयमा घटना […]
कोरोनाबाट भूपू गोरखा सैनिक राईको निधन
लण्डन, २८ वैशाख । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट थप एक भूपू गोरखा सैनिकको शनिबार निधन भएको छ । श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि मेडिस्टोन अस्पतालमा १० दिनअघि भर्ना गरिएका ७७ वर्षीय कर्णबहादुर राईको उपचारका क्रममा निधन भएको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरणले जानकारी दिनुभयो । ताप्लेजुङ मैवाखोला स्थायी घर भई राई विगत तीन वर्षदेखि बेलायतको मेडिस्टोनमा आफ्ना श्रीमती, […]
घुस लिएको अभियोगमा वनहाकिम पक्राउ
नुवाकोट,२७ वैशाख । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख जयमंगल प्रसादलाई घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले आज पक्राउ गरेको छ । टोलीले कार्यालय परिसरबाट नै रु एक लाखसहित उनलाई पक्राउ गरेको हो । अभियुक्तलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि काठमाडौंँ लगिएको वन कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकनाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । सूर्यगढी गाउँपालिका– ५ नयाँपुलमा […]
झापा, बैशाख २७ । ईलाम चुलाचुली-४ का ३१ बर्षीय रण बहादुर लिम्बुको मोटरसाईकल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ । हिजो बेलुका साँढे ७ बजे झापा कमल गाँउपालिका-५ पाडाजुंगी स्थित राजमार्गमा पुर्वतर्फ जादै गरेको ना ६ ख ५४०१ नम्बरको ट्रकले बिपरीत दिशाबाट आउदै गरेको बा६८प ९७७० नम्बरको मोटरसाईकललाइ ठक्कर दिदा मोटरसाईकल चालक लिम्बुको मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी […]
चितवनमा प्रहरी र स्थानीयवासी बीच झडप
चितवन, २७ वैशाख । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ चौकीडाँडामा गए राति प्रहरीले एक राउण्ड हवाईफायर गरेको छ । राप्ती नगरपालिका–१२ बाट ३४ केजी गाँजा बरामद गरेर ल्याउँदै गर्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि हवाईफायर गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा गाँजा बरामद गरी ल्याउने क्रममा चौकीडाँडामा जम्मा भइ […]
भरुवा बन्दुक सहित १ जना पक्राउ
खोटाङ, बैशाख २६ । खोटाङ हलेसी तुवाचुङ-१० का २५ बर्षीय नबिन राई हतियार सहित पक्राउ परेका छन । आज दिउँसो एक बजे ईलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले राईलाई एक नाल भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरेको हो । आफ्नै घर नजिकै बारीमा हतियार बोकेर बसिरहेको अवस्थामा उनि पक्राउ परेका हुन । पक्राउ परेका राई […]